Faahfaahin ka soo baxaysa qodobadii ay ku heshiiyeen Shariifeynka & Farmaajo +Cod – SBC
Faahfaahin ka soo baxaysa qodobadii ay ku heshiiyeen Shariifeynka & Farmaajo +Cod
Magaalada Kampala ee caasimada wadanka Ugandha waxaa xaley saqdii dhexe ku soo afjarmey kulan xasaasi ah oo mudo 10 maalmood ah ay halkaasi ku lahaayeen wafuud ka socota dawlada KMG ah ee Soomaaliya & waliba diblumaasiyiin ka socotey wadamada daneeya arimaha Soomaaliya.
Kulamo adag oo ismarin waa badani uu ka aloosnaa oo u dhaxeeyey Madaxweynaha & Gudoomiyaha Baarlamanka gaar ahaan habkii ay ku heshiiyeen lahaayeen oo ay uga bixi lahaayeen khilaafka u dhaxeeya kaasi oo gaarey in canaan kulul uga timaado golaha amaanka ee qaramada Midoobay oo si cad ugu sheegay hogaaamiyeyaasha Soomaalida inay kala doortaan inay heshiiyaan oo ay ka gudbaan khilaafka & inay doortaan in ay beesha caalamka dhabarka u jeediso oo ay la kufaa kacaan xukuumada tabarta daran ee khilaafku hareeyey.
Kulanka labada Shariif oo ay dhexdhexaadin ka wadeen Madaxweynaha Ugandha Yuweri Musaveni & Wakiilka gaarka ah ee xoghayaha ee qaraamada Midoobay Augustine Mahiga.
Inkastoo xarig jiid badani uu dhexmarey Shariifeynka hadana waxaa go’aanku noqdey in waqti kordhintii ay ku adkeysteen madaxweyneyaasha wadamada Ugandha, Rwanda & Jibuuti la qaato taasi oo keentey in lagu go’aamiyo war murtiyeed ka soo baxay kooxda xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliya.
Hadaba kulamadii labada Shariif ayaa ugu dambeyntii keentey in lagu soo daro Ra’isalwasaaraha maadama Gudoomiyaha Baarlamanka KMG ah Shariif Xasanb Sheekh Aadan uu ku adkeystey inuu meesha ka baxo Ra’isalwasaare Maxamed Cabdilaahi Farmajo & xukuumadiisa, iyadoo khilaafka Shariifeynka uu asal & ubuc u ahaa magacaabistii Ra’isalwasaare Farmaajo.
Madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii xaajadu keentey in lagu riixo in uu aqbalo gorgortanka Shariif Xasan isla markaana dib loo soo magacaabo Ra’isalwasaare & xukuumada cusub oo wasiirada qaar uu soo qoranayo Gudoomiyaha Baarlamanka, taasi oo u muuqanaysa dhisme dawlad wadaag ah oo ay wada dhisanayaan dhinacyo iska soo horjeeda sida jabhado, iyadoo laga gudbay sida muuqata in ay labada Shariif isku asxaab ahaayeen ama isku xisbi (Isbahaysigii dib u xoreynta Soomaaliya), basle sida hada muuqata dawlada kala qaysanaya iyagoon waxba u ogaleyn dadka ka soo horjeeda.
Waxay u muuqatey in Madaxweynuhu uu badbaadso kursigiisa la isku haysto oo meesha ka saarao Ra’isalwasaare Farmaajo, balse sheekadu waxay cirka isku sii shareertey markii Farmaajo uu soo istaaagey “saaxiibayaal kuligeen aynu wada dhacno ama aynu wada joogno”.
Laakiin xaajada oo hoos loo eegay, madax salaax, goodis ka imaanayey dawladaha lacagta siiya AMISOM & dawlada KMG ah, dano shakhsi ah & balanqaad aan la ogeyn halka uu ku socdo wuxuu keenay in ugu dambeyntii uu Ra’isalwasaare Farmaajo aqbalo in uu iska casilo xafiiska wasiirka koowaad, sidaasina lagu dhameeyo khilaafka, iyadoo Shariif Xasan uu waliba doonayo in isaga & dhinacyo kala oo aan shaaca laga qaadin ay raali ka noqdan Ra’isalwasaaraha uu madaxweynuhu soo magacaabayo.
Warar ayaa jira in Ra’isalwasaare Farmaajo uu gabi ahaanba diidey in uu la shaqeeyo xukuumada uu dacalka hayo Gudoomiyaha Baarlamanka.
Ra’isalwasaaraha cusub magacaabistiisa waxaa warar dhanka diblumaasiyada ay sheegayaan in ay dhici karto in tashi lalaga sameeyo maamul goboleedyada wadanka.
Hadaba maxay isku afgarteen oo qalinka ku duugeen Shariifeynka & Farmaajo.
1: In dib loo dhigo mudo sanad ah doorashadii Madaxweynaha, Gudoomiyaha & Kuxigeenadiisa, mudada sanadka ah waxay ka bilaabanaysaa August 2011
2: In Doorashada Madaxweynaha, Gudoomiyaha & Kuxigeenadiisa ay dhacdo inta ka horeysa bisha August 2012.
3: In Ra’isalwasaaraha & xukuumadiisu ay is wada casilaan, isla markaana xukuumad cusub la soo dhiso mudo sanad ah, iyadoo taasi lagu macneeyey in laga gudbo khilaafka xukuumada & baarlamanka u dhaxeeya.
Wasiirka warfaafinta dawlada KMG ah C/kariim Xasan Jaamac ayaa sharaxaya qodobada lagu hesheeyey.
Dhageyso wasiirka arimaha Gudaha oo sharaxaya qodobada heshiiskan
Farmaajow sxb is tag waan ogaa inaad cumar c/rashiid wax bada ka danbeyneyn waxaan filayaa xooggaana waa qaadatay kan kasii dabeynayaa intaas oo kale ayaan u qabeynayaa somaliya sidaa ayay kusoco oo waa sidii loogu talagalay